Taalibaan Oo Go'aan Kasoo Saartay Waxbarashada Haweenka AwdalMedia Awdalmedia Taalibaan Oo Go'aan Kasoo Saartay Waxbarashada Haweenka
Taliban ayaa sheegay in haweenka dalkaasi ay sii wadan karaan inay wax ka bartaan Jaamacadaha, laakiin ay waajib tahay in fasalladu noqdaan kuwa kala saara ragga iyo dumarka, isla markaana ay haweenku xirtaan lebiska Islaamiga ah, sida uu yiri.
Wasiirka Waxbarashada sare ee dowladda Taliban Abdul Baqi Haqqani oo ah Wasiirka waxbarashada Maamulka Taliban ayaa ku soo bandhigay siyaasaddan cusub shir jaraa’id oo uu qabtay, maalmo ka dib markii maamuleyaasha cusub ee Afghanistan ay dhiseen xukuumad dhammaan xubneheedu ay rag yihiin.
Dunida ayaa si dhow isha ugu haysa si loo ogaado ilaa xad inta dhaqanka Taliban ka bedelan yahay keedii hore ee ee soo billowday dhammaadkii 1990-meeyadii.
Xilligaasi, ayaa gabdhaha iyo haweenka ay u diiday waxbarashada, waxaana laga saaray nolosha dadweynaha.
Taliban ayaa sheegtay in ay hadda is bedeshay, oo ay ku jirto sida ay ula tacaamuli doonaan haweenka. Laakinse, waxa ay gacan bir ah u adeegsadeen haween maalmihii la soo dhaafay u bannaan baxayay in ay helaan xuquuq siman.
Rooble Oo Siyaasiyiinta Gobolada Waqooyi kala Hadlay Qabsoomida Doorashada Aqalka Sare.(Sawiro)